Kiiskii guddoomiye Dhagajuun: DF oo dabooleysa xaqiiqda | KEYDMEDIA ENGLISH
Kiiskii guddoomiye Dhagajuun: DF oo dabooleysa xaqiiqda
Ku dhawaad Sagaasahn cisho, oo dabool xoogan la saaray baaritaanka kiiska dilkii guddoomiyihii hore ee degmada Hodan, Cabdixakiin Dhagajuun, waxaa hadda isa soo taraya tabashooyinka la xariira kiiska la daboolay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeeday Guddoomiyihii hore ee degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun, ayaa Dowladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay xirtay kiiskii lagu soo qabanayay raggii ka danbeeyay dilka guddoomiyaha isla markaana ay xabsiga ka sii daysay saraakiil u xirnaa eedda kiiskaan.
Odayaashu waxa ay sheegeen in Guddoomiyahii degmada Hodan ay Dowladdu dishay, haddana ay dabooshay baaritaanka kiiska, waxayna dalbadeen in cadaaladda la hor keento dadkii dilay Dhagajuun.
Odayaashu waxa ay sheegeen in Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo cid kasta oo Kiiskaan quseeyo ay kala fariisteen sidii cadaaladda loo hor keeni lahaa danbiilyaasha, hayeeshee aan taasi wali suura galin.
Ku dhawaad Sagaashan cisho ayaa ka soo wareegtay kiiska dilka Guddoomiyaha mana jiro cid ilaa hadda loo soo taagay maxakamad rasmi ah oo daahfuran, waxaana xabsiga laga sii daayay qaar ka mid ah saraakiil loo xiray kiiska.
Cabdixakiin Dhagajuun, ayaa rasaas lala dhacay gaarigiisa oo marayay wadada Aadan Cade ee degmada Holwadaag, January 21, 2021, waxaana dilkiisa ka danbeeyay Ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya.